4 Types of Leadership - လုပ်ငန်းတို့ရဲ့ ပဲ့ကိုင်ရှင် ဦးဆောင်မှုပုံစံ (၄-မျိုး) -
လက်ရှိလုပ်ငန်းတွေ ရှေ့သို့ တိုးတက်ဦးဆောင်ဖို့ဆိုရင် Leadership ဦးဆောင်မှုစွမ်းရည်ဟာ အရေးကြီးမှာဖြစ် ပါတယ်။ လုပ်ငန်းတိုင်း၊ Company တိုင်း ၊ နိုင်ငံတိုင်းမှာ အရေးကြီးတာကတော့ ဦးဆောင်မှုစွမ်းရည်မြင့်မားလာသည်နှင့်အမျှ လုပ်ငန်းတွေရဲ့အရှေ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ အောင်မြင်လာမှုတွေ ဟာ ပိုမိုပြီးတော့ ဖြစ်ထွန်းလာတာ တွေ့ရပါတယ်။ Leadership လို့ပြောရင် လုပ်ငန်းတစ်ခုမှာ ရာထူးတစ်ခုနဲ့စာရင် လုပ်ဆောင်တဲ့ပုံစံတွေ၊ လွှမ်းမိုးသြဇာပြုနိုင်တဲ့ပုံစံတွေ၊ ရှေ့ကနေ ဦးဆောင်မဟာဗျူဟာ သွားတဲ့ပုံစံတွေ အားလုံးဟာ အရေးကြီးမှာဖြစ်ပါတယ် တကယ်တန်း ဦးဆောင်မှုဆိုတာ Not Position ရာထူးမဟုတ်ပဲ လုပ်ဆောင်တဲ့ Leadership is Action ဆောင်ရွက်မှုကသာ ပိုမိုအရေးကြီးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Leader နဲ့ Leadership မတူညီတဲ့ အချက်ကတော့ ဦးဆောင်သူများအနေဖြင့် ရာထူးတစ်ခု၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်တစ်ခု၊ တာဝန်တစ်ခုကိုယူထားပြီးတော့ Leader ဦးဆောင်တဲ့ သူတွေအားလုံးကိုမှ မိမိလိုချင်တဲ့ပန်းတိုင်တစ်ခု၊ မိမိလိုချင်တဲ့ သွားလိုတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကို ဦးဆောင်နိုင်စွမ်းရှိမှုအားလုံးဟာ Leadership စွမ်းရည်၊ ဦးဆောင်နိုင်တဲ့စွမ်းရည် ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
ဦးဆောင်မှုနဲ့ပါတ်သက်ပြီးတော့ ဦးဆောင်တဲ့ပုံစံတွေအမျိုးမျိုးရှိတဲ့အထဲမှာ ဦးဆောင်တဲ့ပုံစံ(၄)မျိုး အကြောင်းကို တင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
(Support Leadership) အထောက်ပံ့ပေးပြီးတော့ ဦးဆောင်တဲ့ ပုံစံ တစ်မျိုး။
မိမိဝန်ထမ်းတွေ၊ မိမိအလုပ်ရှင်နဲ့အသင်းအဖွဲ့၊ မိမိသွားချင်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုကို အားလုံးကမြင်အောင် အခြေအနေတစ်ခုကို ရှင်းပြတာမျိုး၊ အခြေအနေ တစ်ခုကို လမ်းညွှန်ချက်ပေးတာမျိုး၊ အခြေအနေတစ်ခုကို တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီးတော့သွားတဲ့ပုံစံမျိုးမှာ အကြံဥာဏ်အားဖြင့်ဖြစ်စေ၊ အတွေ့အကြုံအားဖြင့်ဖြစ်စေ အထောက်အပံ့ပေးနိုင်တယ်ဆိုရင် (Support Leadership) ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
(Directed Leadership) ညွှန်ကြားမှုပေးတဲ့ ဦးဆောင်တဲ့ ပုံစံမျိုး။
ဒီလိုပုံစံမျိုးကတော့ အမိန့်အာဏာနည်းနည်းဆန်မယ်။ လမ်းညွှန်ချက်ကို ပိုများမယ်။ ဦးတည်ချက်တွေနဲ့ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုကို ဘယ်လိုဖြစ်အောင်လုပ်ရ မယ်။ ဘယ်လောက်အတိုင်းအတာအတွင်း ပြီးအောင်လုပ်ရမယ်စသည့် လမ်းညွှန်ချက်တွေ၊ ဦးတည်ချက်ကိုအခြေခံပြီးတော့ ဦးဆောင်တဲ့ပုံစံမျိုး အခြေအနေမျိုးနဲ့လည်း ဦးဆောင်မှုပုံစံတွေလည်းရှိပါတယ်။
(Participated Leadership) ပူးပေါင်းပါဝင်ပေးတဲ့ ဦးဆောင်မှုပုံစံမျိုး။
လုပ်ငန်းတစ်ခုမှာ ဦးဆောင်တဲ့ သူအနေနဲ့ ကိုယ်တိုင်ဝင်ပြီးတော့ဦးဆောင်ပြီး ၀န်ထမ်းတွေ အားပေးဆောင်ရွက်မှုဖြစ်စေ ကိုယ်တိုင်က အရှေ့နေ မလုပ်တတ်တဲ့လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာ ပုံစံအားဖြင့်၊ ဥပမာအားဖြင့် ကိုယ်ကရှေ့ကနေ လုပ်ဆောင်တာမျိုးဖြစ်စေ၊ ၀န်ထမ်းတွေအားလုံးနဲ့အတူ ပူးတွဲပြီးတော့ ဆောင်ရွက်နေတဲ့အခြေအနေတွေကို Participated Leadership ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်။
(Achievement Oriental Leadership) အောင်မြင်မှုသို့သာ ဦးတည်သော ဦးဆောင်မှုပုံစံမျိုး။
ဒီခေါင်းဆောင်မှုမျိုးကတော့ တကယ့်ကို ပြင်းပြတဲ့ ဦးဆောင်တဲ့သူတွေ၊ တကယ့်ကို ပြိုင်စံရှား ဦးဆောင်သူတွေမှာ သုံးရတဲ့အရည်အချင်းပင် ဖြစ်ပါတယ်။ challenge စိန်ခေါ်မှာတွေလုပ်ရတယ်။ အောင်မြင်မှုနဲ့ပါတ်သက်ပြီးတော့ မဖြစ်ဖြစ်အောင် သန္နိဌာန်အပြည့်နဲ့ဦးဆောင် ပြီးတော့လုပ်တဲ့အခါမှာ အောင်မြင်ရမယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကို မဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့ ဦးဆောင်မှုပုံစံ ဖြစ်ပါတယ်။
လုပ်ငန်းတခု ရှေ့သို့အောင်မြင်ဖို့ဆိုရာမှာ ဦးဆောင်သူတွေအရေးကြီးပါတယ်။ သို့သော်လည်း ဦးဆောင်သူကတော့ တစ်ယောက်ပါ၊ များစွာသောဝန်ထမ်းတွေ၊ များစွာသော follower တွေရဲ့ တစ်ဦးချင်းစီတွေရဲ့ အလုပ်ပြီးမြောက်မှုတွေကလည်း လုပ်ငန်းတစ်ခုကို အောင်မြင်မှု၊ မအောင်မြင်မှုကို ဖြစ်စေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Good Leader ခေါင်းဆောင်မှု ကောင်းပြီး၊ Bad Follower နောက်လိုက်မှု ညံ့နေရင်လည်း မအောင်မြင်နိုင်သလို၊ Bad Leader ခေါင်းဆောင်မှုညံ့ပြီး၊ Good Follower ဖြစ်နေရင်လည်း မအောင်မြင်နိုင်ပါဘူး၊ ဒါကြောင့် တချို့နေရာတွေမှာ Leadership ဦးဆောင်နိုင်တဲ့စွမ်းရည် အရေးကြီးသလို အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ path goal model ဆိုတဲ့ Leadership ပုံစံလေးကိုလည်း တင်ပြပေးပါရစေ။
ဦးဆောင်သူရဲ့ ရှေ့က ဦးဆောင်တဲ့ပုံစံတွေက အရေးကြီးသလို နောက်တစ်ချက် အရေးကြီးတာကတော့ ပတ်ဝန်းကျင်မှတဆင့် ရနိုင်တဲ့ပံ့ပိုးမှုတွေ၊ ပါတ်ဝန်းကျင်မှတဆင့် ပူးပေါင်းပါဝင်ပြီးတော့ ဆောင်ရွက်မှုတွေ ဒါတွေအားလုံးကလည်း အရေးကြီးမှာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တစ်ချက်အရေးကြီးတာကတော့ ၀န်ထမ်းတွေ၊ အဖွဲ့ဝင်တွေ၊ နောက်မှ follower တွေအားလုံးရဲ့ အထောက်အပံ့ပေးတဲ့ ပုံစံကလည်း ပိုပြီးတော့အရေးကြီးပါ တယ်။ ဒီနှစ်ချက်တွေ ကိုပေါင်းလိုက်ရင် ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ အထောက်အပံ့ အကူအညီနဲ့သော်လည်းကောင်း၊ နောက်လိုက်ဝန်ထမ်းတွေ၊ အဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးရဲ့ အကူအညီပေးမှုနဲ့ သော်လည်းကောင်း ဦးဆောင်တဲ့သူရဲ့ အရည်အချင်းဟာလည်း ထူးချွန်ကောင်းမွန်တဲ့ အရည်အချင်းရှိတယ်ဆိုရင်တော့ လိုချင်တဲ့ပုံစံ၊ လိုချင်တဲ့ရလာဒ်၊ လိုချင်တဲ့အောင်မြင်မှုကို အချိန်တိုအတွင်းမှာ ဖန်တီးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
နိဂုံးချုပ် တင်ပြချင်တာကတော့ အဖွဲ့စည်းတိုင်းမှာ၊ လုပ်ငန်းတိုင်းမှာ အရေးကြီးတာကတော့ ဦးဆောင်မှု အရည်အချင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဦးဆောင်မှုအရည်အချင်း မြင့်မားလာသည်နှင့်အမျှ မိမိအဖွဲ့အစည်းရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်၊ ပန်းတိုင်၊ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်တွေဟာ ပိုပြီးတော့အောင်မြင်လာမယ်။ ပိုပြီးတော့ ရှေ့ပို ရောက်လာမယ်။ ၀န်ထမ်းတွေအားလုံး နောက်ကလိုက်တဲ့အခါမှာလည်း သူ့အခြေအနေမှန် နေရာမှန်၊ အလုပ်မှာလည်းတကယ့်ကို တက်ကြွစွာပါဝင်ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲတော့ ဦးဆောင်မှု အရည်အချင်းကို မြှင့်တင်ပြီးတော့ လုပ်ငန်းရဲ့စွမ်းရည်၊ လုပ်ငန်းရဲ့မဟာဗျူဟာ၊ လုပ်ငန်းအောင်မြင်မှုကို ပိုပြီးတော့ ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ နိဂုံးချုပ်တင်ပြလိုက်ပါတယ်။
စာရေးသူ – ဇင်ဖြိုးပိုင် (MESI Institute – www.mesimagazine.com)
Work Life Balance ဆိုတဲ့... ဘ၀မှာ (အောင်မြင် ပျော်ရွှင်) ဖို့အတွက်လား... ???